DISTRIKAN’I TSARATANANA : Maty ny lehiben’ny dahalo, sarona ny basy fampiasany
Mamaivay hatrany ny asan-dahalo any amin’ny Faritr’ i Betsiboka amin’izao fotoana izao na dia efa misy aza ny fiaraha-mientan’ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana.
Miseho ho tsy manaiky lembenana ireo mpangalatr’omby ary manao ny asa ratsiny saingy miezaka manohitra sy manao izay ho vitany ihany ny Polisy sy ny Zandary. Maro mihitsy ireo efa namoy ny ainy teo am-perin’asa ary anisany mibaby izany koa ny tompon’omby ankehitriny.
Tsy mifidy andro na fotoana intsony araka izany ireo malaso fa tonga dia sahy manatanteraka ny fandrobana avy hatrany matetika. Etsy andaniny ny fananan’izy ireo ny fitaovam-piadiana mahery vaika, izay mbola tsy fantatra mazava ireo mpamatsy azy. Vao mainka tsy mahatohitra ny fokonolona noho izay hery tsy mitovy eo amin’ny roa tonta izay.
Manoloana ireo olana goavana voalaza ireo anefa dia mbola hita taratra ihany ny fahombiazana amin’ny famongorana ireo dahalo raindahiny amin’ny fangalaran’omby hatreto. Porofon’izany ny fahafatesan’i Gérvais ilay lehibenà dahalo tao amin’ity faritr’i Betsiboka ity. Araka ny loharanom-baovao mahakasika ny raharaha dia lavon’ny balan’ny zandary io lehilahy io nandritra ny fanarahan-dia natao afak’omaly antoandro.
Tao amin’ny fokontany Antanandava Kaominina Bekapaika Distrikan’i Tsaratanàna no nisehoan’izany rehefa nifanena tamin’ireo mpitandro filaminana ireo dahalo miisa telo nitam-basy.
Marihana fa niambina kizo sy nanara-dia dahalo ireo zandary tamin’io fotoana io ary tsy nampoizin’ireto olon-dratsy ny fifanenana tampoka. Vokany, io malaso iray io ihany aloha no namoy ny ainy ary sarona ny basy fampiasany. Tafaporitsaka ny roa lahy ambiny ary mbola karohina fatratra amin’izao fotoana izao.
Ny Borigadin’i Tsaratanàna ihany no voalaza fa misahana ny fanadihadiana ankehitriny.